Xildhibaan Maryam Cariif Qaasim » Know Your MPs (Test Page) – Kalfadhi
Xildhibaan Maryam Cariif Qaasim » Know Your MPs (Test Page)
Xildhibaan Maryam Cariif Qaasim
Xildhibaan Golaha Shacabka Waxay ku dhalatay Muqdisho – 1946-kii Deegaan-doorasho: Galmudug Xilal hore: Guddoomiyihii Guddiga Doorashada Madaxtinnimada – 2012 home Work Phone: 123-456-789work Personal Email: [email protected]INTERNET
Xildhibaan Maryam Cariif Qaasim oo ah sharci-yaqaan kana mid ah xildhibaannada baarlamaanka 10aad ee Soomaaliya waxay ku dhalatay magaalada Muqdisho 1946-dii. Aabaheed Cariif Qaasim waxa uu ahaa dhaqtar caafimaad halka adeerkeed Xiirey Qaasim uu ahaa ganacsade maal-qabeen ah. Labadooda ayayna dhiira-gelin ka heli jirtay. Maryam oo ah hooyo 4 dhal ah deegaan-doorashadeeda waa Galmudug.
Waxbarashada hoose iyo dhexe waxay kaga baxday dugsiyadii Xamar Jajab iyo Xamar weyne halka dugsiga sare ay kaga baxday machadka xisaabaadka Muqdisho 1967-dii.
Sanadkii 1987-dii ayay darajada koowaad ee sharciga waxay ka qaadatay jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed. Isbarbar-dhigga dastuurrada dunida ayay cilmi-baaristeeda ka sameysay.
Waxay Talyaaniga u aaday waxbarashada sare ee heerka 2aad ee jaamacadda 1998-dii, waxay sidoo kale cilmi-baaristeeda masterka ka sameysay isbarbar-dhigga dastuurrada dunida. Maryam waxay ku hadashaa oo afka hooyo u dheer afafka Carabiga, Ingiriisiga iyo Talyaaniga.
Bankiga dhexe ee Soomaaliya ayay ka shaqo billowday toddobaatameeyadii. Waxay ka noqotay madaxa xafiiska baarista hay’adaha dowladda, waxay ka tagtay shaqada bankiga sanadkii 1979-kii. Waxay u wareegtay dhanka ganacsiga iyada oo la shaqeysay warshaddii kiimikada Soomaaliya kana ahayd maamule ku-xigeen, warshad kale oo saabuunta soo saarta ayay muddo xileed la shaqeysay.
Intii u dhaxaysay sanadihii 1981 illaa 1990-kii, waxay agaasime ka noqotay warshad soo saari jirtay suufka. Sanadihii 1993 illaa 1994 waxay shirkadda duulimaadka Salaama Airline kula shaqeysay maamulaha guud. Dalalka Masar, Djibouti iyo Isu-tagga Imaaaraadka Carabta ayay waqti howlo ganacsi ahaa kusoo qaadatay.
Maryam iyo Siyaasadda
Sannadkii 2000 ayay markii ugu horreysay kamid noqotay xubnihii goloha baarlaamka oo ka koobnaa 275 xubnood. Sannadkii 2012-kii, Maryam Cariif waxay noqotay guddoomiyaha guddigii doorashada madaxtinimo ee lagu soo doortay Xasan Sheikh Maxamuud. waxay muddo afar sanno ahayd guddoomiyihii guddiga la socodka dastuurka KMG.
Maryan Cariif Qaasim ayaa leh qoraallo u badan buugaag iyo maqaallo. Buugaagta ay qortay waxaa kamid ah “Hostages of the People Who Kidnapped Themselves (1994). Among Strangers (2012) iyo Soomaaliya: Yaa u Maqan?! (2018).